🥇 ▷ Exoplanet waxay ogaatay halka ay ku jirto uumiga biyuhu - iyo xataa roob ✅
Exoplanet waxay ogaatay halka ay ku jirto uumiga biyuhu – iyo xataa roob
Koox saynisyahanno ah oo ku takhasustay Jaamacadda Montreal, Canada, ayaa ku dhawaaqay inay aqoonsadeen uumiga biyaha jawiga jahawareer fog iyo, sidaad si sahal u qiyaasi kartaan, warkan waxaa si weyn u soo dhoweeyay bulshada cilmiga leh. Tani waa sababta oo ah biyuhu waa lama huraan u ah soo bixitaanka iyo taageerida qaababka nolosha – sida aan ognahay – waana sababtaas sababta “xayawaanku ugaadhsadeyaasha” isha ugu hayaan jiritaanka qaybtaan.
(Suurtogal ahaan) meeraha roobka
Exoplanet-ka su’aasha ayaa lagu magacaabi jiray K2-18b waxaana soosaareysay Nasa’s Kepler space telles sanadii 2015. Waa 111 sano oo iftiin ah oo ka socda Dunida, waxyar in ka badan 2 jeer ka balaaran aduunkeena iyo baaxadiisa ayaa lagu qiyaasey 9 jeer tan adduunka. Intaas waxaa sii dheer, Exoplanet wuxuu ordayaa carib casaanka masaafad u eg kan adduunkeenna uu ku safrayo Qorraxda, oo ah aagga caanka ah “deegaanka lagu noolaan karo,” taasoo la micno ah in K2-18b ay ka heli karto tiro tamar ah xiddigeeda la mid ah kan aan ka heshay annaga.
(Isha: ABC News / ESA / Hubble / M. Kornmesser / Dhalmada)
Biyaha uumi-baxa, dhinaca kale, waxaa laga helay xog ay soo aruurisay shirkadda NASA ee Hubble Space Telescope, ka dib cilmi-baarayaashii Montreal waxay sameysteen moodallo cimilo badan isla markaana sameeyey jilitaanno, waxay ku soo gabagabeeyeen, ka sokow exoplanet-ka oo leh jawi ay ku jiraan uumi, waa suuro gal in biyuhu biyuhu buuxiyaan oo roobku da’o.
Ha u maleynin inay tahay hawl fudud in la ogaado uumiga biyuhu dusha fog, gaar ahaan sida K2-18b, oo aan lahayn meeraha waaweyn! Waxay ka tirsan tahay meerayaal aad u tiro badan oo kuyaal daafaha dunida oo loo yaqaan “Mininetunos” iyo, bilow ahaan, xaqiijinta in xiddigahaasi runtii yihiin meerayaal yihiin caqabad. Tani waa sababta oo ah aqoonsiga badeecooyinka waxay ku dhacdaa baaritaanka duulimaadka meeraha – oo sababa kala duwanaansho joogto ah oo ku saabsan iftiinka ay soo baxaan qoraxdooda – oo ay dhacdo adduun yar, iftiinka xiddigoodu badanaa waxay farageliyaan daawashada. . Bal hadda ka fikir dhibaatada ku jirta falanqaynta jawiga mid ka mid ah meerayaashaas.
Si loo go’aamiyo isku dhafka jawiga, saynisyahannadu waxay u baahan yihiin inay baaraan sida iftiinka uu galiyay xiddiguhu u shaandheeyo gaasaska ka soo baxa iyo waxa ka dhexeeya labadan qaybood u eg yahay – si loo dhiso muruqyada ay mas’uul ka noqon karto la arki karo saamaynta. Sida laga soo xigtay astrophysicist-ka jaamacadda University College London, England, shaqaalaha goobta ‘Verge’, daraasadda noocan oo kale ah waxay la mid noqon doontaa koox fadhigeedu yahay magaalada New York oo diiradda saareysa aaladda London, daawashada kaneecadu oo u duuleysa iftiinka hortiisa, ka dibna isku day. si loo go’aamiyo midabbada baalashaadu ay yihiin. Way adag tahay!
Horumar aad u muhiim ah
Kooxda Montreal waxay qabatey shaqo cajiib ah oo ku saabsan aqoonsashada uumiga biyaha – waxayna saadaalinayaan inay xitaa roob ku da’aan K2-18b – daahfurka ayaa ah mid ka mid ah horumarka ugu muhiimsan ee ugu dambeyntii lagu helo nolosha meerayaasha kale. . Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inaysan ahayn xilligan la caddeyn karo shakiga weligiis ah iyo inaan keli ku nahay adduunka oo dhan.
(Isha: Jirka Org / Jaamacadda Montreal / Dhalmada)
In kasta oo dhammaan natiijooyinka laga helay K2-18b, saynisyahannadu waxba kama oga waxa ay ka kooban tahay ama waxa jawigeedu ka kooban yahay (marka lagu daro kuleylka biyaha). Maaddaama ay tahay mid ka mid ah golaha wasiirrada, saadka ayaa suuragal ah in uu leeyahay guntin dhagax ah, laakiin ma aha meel adag, sidaa darteed xitaa haddii uu roob ku da’o, biyuhu ma laha meel ay ku uruursadaan ama ku qulqulaan, xitaa haddii ay ku taallo K2-18b. aagga hoyga ee xiddigtaadu.
Sida iska cad, indha indhayn dheeraad ah iyo daraasado ayaa loo baahan doonaa in la sameeyo si loo xaqiijiyo in kuwani runtii yihiin xaaladaha ka jira bannaanka hore iyo, iyada oo la raacayo horumarinta teleefoonno horumarsan oo awood badan leh iyo kormeerro meelaha bannaan ah, cilmi baadhayaashu waxaa suuragal ah in ay jawaabo helaan sannadaha soo socda.